သီလဝါ စီမံကိန်း သိမ်းယူ လယ်မြေများအတွက် လျော်ကြေးပေးမည် | ဧရာဝတီ
သီလဝါ စီမံကိန်း သိမ်းယူ လယ်မြေများအတွက် လျော်ကြေးပေးမည်
စနေလင်း| February 15, 2013 | Hits:4,143
1 | | သန်လျင် အလွမ်းဆွတ်ကျေးရွာရှိ သီလဝါ စက်မှုဇုန် စီမံကိန်း နယ်မြေ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ သီလ၀ါစက်မှုဇုန် စီမံကိန်းအတွက် သိမ်းယူထားသော လယ်မြေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ပေးသော လျော်ကြေး မရရှိသေးသူများအတွက် ယခု အသစ် ပြဌာန်းလိုက်သော လယ်ယာမြေ ဥပဒေအတိုင်း လျော်ကြေးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်းနယ်မြေအတွက် သိမ်းယူထားသော လယ်မြေစာရင်းကို ပြုစုထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ လျော်ကြေး မရရှိသေးသူများအား မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံ ကြည့်ရှု စိစစ်ကာ သတ်မှတ်ထားသည့် လျော်ကြေးငွေ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း လျော်ကြေးငွေ ရရှိပြီးမှသာ ထွက်ခွာသွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လယ်ယာနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုးမင်းက သန်လျင်မြို့နယ် မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ခရိုင်ရုံးတွင် ပြုလုပ်သော ဒေသခံလူထုနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
သီလ၀ါစက်မှုဇုံ စီမံကိန်း နယ်မြေထဲတွင်ပါသည့် အလွမ်ဆွတ်ကျေးရွာ၊ သီလ၀ါ ကျေးရွာနှင့် ဘုရားကုန်းကျေးရွာ အပါအ၀င် လယ်ဧက ၂၆၆၅ ဧကပေါ်ရှိ နေအိမ်များကို ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ဖယ်ရှားပေးရန် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့မှ အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်း ဒေသခံလူထုနှင့် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ ပထမဦးဆုံး တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်သည်။
“အဲဒီ အပိုင်းမှာ နေနေတဲ့ လူတွေက အဲဒီမှာပဲနေ၊ လယ်ယာမြေ လုပ်နေတယ် ဆိုရင်လည်း ဥပဒေအတိုင်း ဆက်လုပ်နေလို့ ရတယ်။ လယ်ယာမြေ ဥပဒေအတိုင်း လျော်ကြေး ပေးပြီးတော့မှ ဖယ်ရမှာ။ လျော်ကြေး ပေးဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ ဧက ၆၇၀ ကျော် ၇၀၀ နီးပါးရှိတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီ နေရာတွေမှာ သီးနှံတွေ စိုက်ထားတုန်းပဲ ဆိုရင် သီးနှံလျော်ကြေးပါ ထပ်ပေးမှာပါ” ဟု ၀န်ကြီး ဦးစိုးမင်းက ပြောသည်။
ယခင် တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက်က ၎င်းလယ်မြေများကို လယ်ယာမြေ ဥပဒေ လ/န ၃၉ ဖြင့် သိမ်းယူခဲ့ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရန်ရှိနေကြောင်း၊ ထို စီမံကိန်း မလုပ်တော့ဟု ကြေညာခြင်းမျိုးလည်း မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခု သိမ်း ဆည်းမှု များသည်လည်း မြေများကို သိမ်းရန်မဟုတ်ပဲ ထိုမြေပေါ်တွင် ရှိနေသည့် ကျူးကျော် အဆောက်အဦးများ ကို ဖယ်ရှား ပေးရန် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်က ပြဌာန်းခဲ့သည့် လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင် ပြုလုပ်သည့် ဥပဒေ၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉ (လ/ န ၃၉) ကို ယခုအခါ ပယ်ဖျက် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ယခင်သိမ်းယူစဉ်က လ/န ၃၉ အရ ၆ လအတွင်း မြေညှိ ဆောင်ရွက်လိုက်သည်နှင့် လုပ်ငန်းစပြီဟု ယူဆရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တဖန် သိမ်းယူစဉ်က သီးနှံစိုက်ထားသော မြေ ၁ ဧကလျှင် အဆိုပါ ကာလ ပေါက်ဈေးဖြစ်သည့် ကျပ် ၂ သောင်း၊ သီးနှံ မစိုက်ထားသောမြေ ၁ ဧကလျှင် ကျပ် ၁ သောင်း၊ အိမ်နေရာ အတွက် ပေ ၄၀/ ပေ ၆၀ မြေတကွက် ပေးပြီးသားဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည် ၀င်ရောက်နေထိုင် လုပ်ကိုင်သည့်အခါ ကျူးကျော် သဘောသို့ သက်ရောက်နေကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
“လယ်မြေပေါ် စီမံကိန်း မလုပ်သေးလို့ ပြန်လယ်လုပ်ခွင့် ပြုတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတော်က လိုအပ်တဲ့အချိန် ဖယ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ စာချုပ် ချုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။ အဲဒီလို ကတိက၀တ်တွေ တည်ဖို့ လိုတယ်။ အခု နိုင်ငံတော်က လိုအပ်လို့ အကောင်ထည် ဖော်တော့မယ် ဆိုရင်လည်း မိဘပြည်သူတွေက အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နောက်ဆုတ်ရမှာပေါ့” ဟု ၀န်ကြီးက ဆက်ပြောသည်။
တောင်သူများမသိရဘဲ စစ်တပ်က လယ်သိမ်းခဲ့ဟု ဆို
မလက်တို အဓိကရုဏ်း ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆက်ဖြေရှင်းမည်
မန်း ရေနံမြေ တောင်သူများ လယ်ယာမြေ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေ
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Sunshine February 18, 2013 - 2:37 pm	Compensation is not enough. Fair compensation is needed.
စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ မဆပ်နိုင်သည့် လယ်သမား ၁၅၀၀၀ ကျော်ကို အရေးယူ
စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေ ပြန်မဆပ်သည့် လယ်သမားများကို အစိုးရ တရားစွဲမည်
ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ၀င်မည့်သူများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်၍ ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ
မြေသိမ်းမှုကြောင့် တောင်သူ နစ်နာချက်များ လွှတ်တော် တင်မည်ဟု ၈၈ အဖွဲ့ ကြေညာ
တောင်သူလယ်သမားများ ကွန်ရက်မှ ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ်ရှိ
ဗိုလ်ချုပ်စိုးရှိန် သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှု တောင်သူများကို အမှုဖွင့်ခွင့်မပေး